TV-ga Soomaalida ee ka baaha Seattle Cable Acess Network wuxuu sii daayay fiidyawyo sharxaya tiro-koobka 2010 ee daawadeyaasha Soomaalida Maraykanka 28 Maarso, 2010. - HistoryLink.org
TV-ga Soomaalida ee ka baaha Seattle Cable Acess Network wuxuu sii daayay fiidyawyo sharxaya tiro-koobka 2010 ee daawadeyaasha Soomaalida Maraykanka 28 Maarso, 2010.
28 Maarso, 2010, TV-ga Soomaalidu wuxuu sii daayay fiidyawyo sharxaya tiro-koobka 2010 ee daawadeyaasha Soomaali Maraykanka. TV-ga Soomaalida waa bandhig luugadda Soomaaliga ku baxa kaasoo ka baaha Seattle Cable Access Network. Fiidyawgu wuxuu qayb ka yahay dadaalada Xafiiska Tiro-koobka si uu u sharxo waxa ay tahay macluumaadka tiro-koobeyaashu soo ururiyaan iyo in lagu dhiirigaliyo dadka bulshooyinka muhaajiriinta ah inay buuxiyaan foomamkooda tiro-koobka. Muddada afarta saac ee TV-ga Soomaalidu hawada ku jiro, wuxuu gaadhaa bulshada Soomaalida Seattle iyo magaalooyinka kale ee Maraykanka wuxuuna siiyaa war Soomaali. Bandhiggiisa toddobaadlaha ah waxa dheer, in TV-ga Soomaalidu soo saaro fiidyawyo af Soomaali ah oo sharxaya adeegyada dawlada degmada King. TV-ga Soomaalidu wuxuu aad ugu lugleeyahay dhacdooyinka bulshada Soomaalida.